cast - Synonyms of cast | Antonyms of cast | Definition of cast | Example of cast | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for cast
Top 30 analogous words or synonyms for cast
သံ (သတ္တု) သတ္တု အားလုံးထဲတွင် သံကို အများဆုံး အသုံးပြုပါသည်။ အခြားသတ္တုများနှင့် နိုင်းယှဉ်လျှင် အကုန်အကျသက်သာပြီး အသုံးဝင်သည့်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သတ္တုတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သံ၏ အသုံး ဝင်ပုံများမှာ နို့ဆီဘူးခွံမှ အစ ကား ၊ လေယာဉ်၊ သင်္ဘောများအထိ အသုံးပြုကြပါသည်။ သံမဏိသည် အထင်ရှားဆုံး သံသတ္တုစပ်ဖြစ်ပြီး အခြားသံဒြပ်စင်ပါဝင်သော သတ္တုစပ်များမှာ Pig Iron ၊ Cast iron၊ Carbon Steel ၊ Wrought Iron နှင့် Iron Oxide တို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ( Pig Iron-ကာဗွန်ပါဝင်မူ့ ၃.၅%-၄.၅% ပါသော အိုင်းယွန်းသတ္တုစပ်၊ Cast Iron-ကာဗွန်ပါဝင်မှု ၂.၅% နှင့် အတူ အခြား အညစ်အကြေးများ ရောနှောနေသော သံသတ္တုစပ်၊ wrought iron-ကာဗွန်ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပါးသော သန့်စင်ပြီး pure iron)
ဂျွန်အွန်ဂျီ In 2014, she starred in another musical, the stage adaptation of 2004 series "Full House". Afterwards, Jung was cast in the leading role in romantic comedy series "Trot Lovers", which depictedafemale singer's struggles to become successful in the old-fashioned musical genre trot.
ပီအာစနစ် ပီအာဆိုသည်မှာ Proportional Representation ဆိုသည်ကို အတိုကောက်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနီးစပ်ဆုံး မြန်မာမှုပြုရလျှင် အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် ဟုဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရရှိသည့် မဲအရေအတွက်အရ၊ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွင် အချိုးကျခွဲဝေယူရမည့်- စနစ်ဟု နားလည်ရပါသည်။ အဘိဓာန်ဖွင့်ဆိုချက်အတိုင်း အတိအကျဖော်ပြရလျှင် ယခုလို…။ ‘electoral system designed to produce legislative bodies in which the number of seats held by each group or party is proportional to the number of votes cast for….’
အဖြူဆင်းခြင်း Trichomonas ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဖြူဆင်းခြင်းဟာ အရောင်က ဖြူမနေပဲ စိမ်းဝါဝါအရောင်ရှိပါတယ် ။ ပမာဏ များပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီစိုမယ် ။ ယားယံမယ် နောက်ပြီးအနံ့လည်းရှိပါတယ် ။ မိန်းမကိုယ်တစ်ခုလုံး ရဲနေပြီး အဲဒီ အပေါ်မှာ အမည်းပြောက်အဖြူပြောက်လေးတွေ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ မှိုစွဲတာကြောင့် မှုမမှန်တဲ့ အဖြူဆင်းခြင်းမှာကျတော့ မိန်းမကိုယ်နံရံမှာ အဖြူဖတ်လေးတွေ ကပ်နေလေ့ရှိတယ် ။ အဲဒါကို milk cast လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ။ တစ်ဆို့ဆို့နဲ့နေရခက်တဲ့ လက္ခဏာတွေခံစားရလေ့ရှိပါတယ် ။ Trichomonas vaginitis ဆိုတာသေချာရင်အထက်ကပြောသလို ဆေးသောက်လို့ရသလို မိန်းမကိုယ်ထဲ ထည့်တဲ့ဆေးတွေ လည်းသုံး လို့ရပါတယ် ။ မှိုစွဲလို့ အဖြူဆင်းတာကိုလည်း ထည့်ဆေးစားဆေးတွေသုံးလို့ရပါတယ် ။ တိုးတက်လာတဲ့ဆေး ပညာအရနောက်ပိုင်းမှာ ပိုးစွဲတဲ့ ၃ မျိုးစလုံးအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ ထည့်ဆေးတွေရှိလာပါတယ် ။ တစ်ညတစ် လုံးနဲ့ ၆ ည ထည့်ပေးရပါတယ် ။
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် In time,anumber of prominent members of Congress began to oppose the program's expansion, including former Democratic presidential nominee John Kerry, who cast votes against the B-2 in 1989, 1991 and 1992 whileaU.S. Senator, representing Massachusetts. By 1992, Republican President George H.W. Bush called for the cancellation of the B-2 and promised to cut military spending by 30% in the wake of the collapse of the Soviet Union.
မြန်မာဘုရင့်တပ်မတော် The quality gap between locally manufactured guns and European arms continued to widen as new rapid advances in technology and mass production in Europe quickly outstripped the pace of developments in Asia. Important developments were the invention of the flintlock musket and mass production of cast-iron cannon in Europe. The flitntlock was much faster, more reliable and more user-friendly than the unwieldy matchlock, which required one hand to hold the barrel, and another to adjust the match and pull the trigger.
Britpop Britpop သည် rock နှင့် pop ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်မှ စတင်ခဲ့သည်။ britpopသည် ၁၉၉၀အစောပိုင်းတွင် British independent music မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး တီးဝိုင်းများသည် ၁၉၆၀နှင့် ၁၉၇၀ ၏ British guitar pop music ၊ ၁၉၈၀မှ indie rock တို့ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ အထူးသဖြင့် The Smiths ဖြစ်သည်။ Britpop သည် တီးဝိုင်းများအပေါ်အာရုံစိုက်ထားသည်မှာ သီချင်းဆိုရာတွင် ဗြိတိန်ဝဲသံနှင့် ဗြိတိန်နေရာများ၊ ဗြိတိန်ယဉ်ကျေးမှုများကို ကိုးကားထားသည်။ ၁၉၈၀နှင့် နောက်ပိုင်းနှင့် ၁၉၉၀အစောပိုင်းတွင် ဂီတဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဦးတည်ရာများကို ဆန့်ကျင်လျက် တုံပြန့်မှုအဖြစ် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်မှ ထူးခြားဆန်းကျယ်သော grunge ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်မှ အမေရိကန်grunge တီးဝိုင်းများထဲမှ ဂီတဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုတွင် new british group ဖြစ်သော Suedeနှင့် Blur တီးဝိုင်းတို့သည် ဂီတဆိုင်ရာအနိုင်အထက်ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် လှုပ်ရှားမှု စတင်ခဲ့သည်။ အတိတ်၏ British music ကို ကိုးကားခြင်းနှင့် ဗြိတိန်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များနှင့် အကြောင်းအရာများရေးသားခဲ့ကြသည်။ ထိုတီးဝိုင်းများသည် မကြာခင် Oasis, The Verve, Pulp, Placebo, Supergrass, Cast, Space, Sleeperနှင့် Elastica တို့နှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ Britpop အုပ်စုသည် british alternative rock ကို mainstream ထဲသို့ ယူဆောင်ခဲ့သည်။ Cool Britannia ဟုခေါ်သော Backbone ofalager British Cultural movementကို ပုံသွင်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၇တွင် လှုပ်ရှားမှုသည် နှေးကွေးလာပြီး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများ စတင်၍ တုံဆိုင်းကာ ပြိုကွဲခဲ့သည်။ လူကြိုက်များသော တီးဝိုင်းများသည် နိုင်ငံရပ်ခြားအထိ ကျယ်ပြန့် အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း (အထူးသဖြင့် အမေရိကန်အထိ) ဆယ်စုနှစ်အဆုံးတွင် လှုပ်ရှားမှုသည် ကြီးမားစွာ ကျရှုံးခဲ့သည်။